IBlackberry Loft-iGem efihliweyo
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguOlwyn
Isitudiyo esitsha esikhethekileyo esilungiselelwe ukuzenzela ukutya; ukulala okungaphezulu kwe-2, ibekwe kwindawo enemithi ezolileyo efanele umthandi wendalo kunye nabo banomdla wokufumana zonke izinto ezinomtsalane zoMntla Ireland.
Ifakwe kwi-1 yeemayile kwilali enqabileyo ye-Templepatrick kunye neekhilomitha ezi-4 kwisikhululo seenqwelomoya saseBelfast. Imi kumgangatho wesibini, ngelishwa igumbi alibafanelanga abo bakhubazekileyo njengoko lifikelelwa kuphela ngezinyuko zamatye.
Indawo ephezulu eqaqambileyo, epholileyo enekhitshi yanamhlanje ebandakanya isitovu, i-oveni, i-microwave, ifriji, umatshini wekofu kunye nazo zonke izixhobo ezifunekayo ukwenza ulonwabo lokupheka! Indawo entle yokuphumla! Zenze ukhululeke kwikona yokufunda kunye noluhlu lweencwadi kunye namaphecana malunga nommandla. Njengoko iyindawo ephakamileyo inesilingi ezithambekileyo kuyo yonke indawo, kodwa ishawari inobude obugcweleyo. Inokufikelela kwiindawo zokuhlala ngaphandle kwaye iibhayisekile ziyafumaneka xa uzicelile. Iindwendwe zinokonwabela iimbono ezintle zehlathi ukusuka kwifestile yokulala kunye neentaka ezininzi zegadi. Ibhodi yabakhenkethi ivunyiwe.
Indawo efanelekileyo yokujonga amaphandle kwaye ukonwabele ukuhamba kwelizwe ixesha elide. Kumgama wokuhamba welali yaseTemplepatrick, iHotele yaseHilton kunye nebala yegalufa, esandula kuvulwa iRabbit Hotel. Inkonzo yohambiso iyafumaneka kwiindawo ezikufuphi zeBamboo kunye neSpice.
Indawo esembindini kakhulu yokuhlola iBelfast (imizuzu eyi-20) -Ikota yeTitanic kunye noNxweme lwaseMantla eAntrim. I-Antrim Castle Grounds iimayile ezi-4, iWhitehead kunye neGobbins cliff walk (40mins)
Umbuki zindwendwe ngu- Olwyn
Sihlala kwipropathi esecaleni kwendawo ephezulu kwaye siya kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho. Sinolwazi olubalaseleyo ngeendawo ezisingqongileyo, iihambo, iindawo zokundwendwela, ezona ndawo zokutyela zibalaseleyo kwaye sinokuqinisekisa ukuba unokuhlala kakuhle!
Sihlala kwipropathi esecaleni kwendawo ephezulu kwaye siya kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho. Sinolwazi olubalaseleyo ngeendawo ezisingqongileyo, iihambo, iindawo zokundwendwela…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Templepatrick